Sheekh Mahad Ibraahim oo Dugsiyada Nuuradiin ku soo dhaweeyey Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi | Salaan Media
Sheekh Mahad Ibraahim oo Dugsiyada Nuuradiin ku soo dhaweeyey Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi
August 25, 2021 | Published by: Hamse
Hargeysa (SM)- Maamulaha Guud ee Dugsiyada Nuuradiin Sheekh Mahad Ibraahim, ayaa maanta Dugsiyada Nuuradiin ee Hargeysa ku soo dhaweeyey Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaalida oo booqasho ku jooga Caasimadda Somaliland ee Hargeysa.
Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi oo deggen waddanka Qadar ayaa Hargeysa u yimi ka-qayb-galka Kulan-diimeed Culimada Soomaaliyeed todobaadkan lagu soo gebo-gabeeyey Hargeysa, ayaa isaga oo ay wehelinayaan culimo kale, waxa ay maanta booqasho ku tageen Dugsiyada Nuuradiin ee Hargeysa oo noqday dugsigii u horreeyey ee sheekhu booqdo, waxaanu halkaas muxaadaro iyo hadallo diini ah uga jeediyey Ardayda Dugsiyada Nuuradiin.
Ugu horeyn, Mid ka mid ah Hablaha da’da yar ee wax ka barta Dugsiyada Nuuradiin, ayaa cod naxariis leh oo culimadii Sheekh Cabdirashiid hoggaaminayey soo jiidatay ku akhriday Aayado ka mid ah Qur’aanka Kariimka ah oo si gaar ah uga hadlaya Waajibaadka Allah dul-saaray Gabadha Muslimka ah inay Xijaabka Xidhato.
Maamulaha Guud ee Nuuradin School Sheekh Mahad Ibraahim oo ay weheliyaan maamulka, macalimiinta iyo Ardayda Dugsiyada Nuuradiin, ayaa culimada ku soo dhaweeyey dugsiyada Nuuradiin oo uu tilmaamay inay sharaf iyo karaamo weyn u tahay inay soo booqdaan dugsiyada Nuuradiin.
“Mahadda Illaahay oo aynaan dhammayn karin kaddib, waxaynu u mahad-naqnaynaa Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi oo aad wada-garanaysaan. Runtii aad bay sharaf iyo qiimo weyn inoogu tahay saaka inaynu soo dhaweyno oo aynu dhegaysanno sheekheenna oo dardaaran iyo duco intaba aynu ka guntanno, Illaahayna waxaan ka baryayaa inuu innaga dhigo kuwii ka faa’idaysta ee ku camal-fala.”
“In badan ayaa la dhegaystaa wanaagga iyo kheyrka, in badan baa la garab maraa…laakiin muhiimaddu waxa weeyaan in wixii kheyr ah ee wanaagsan ee waano iyo kheyr ah inaynu weelayno, ficilna u rogno. Illaahayna waxaynu ka baryaynaa.” Sidaas ayuu yidhi Sheekh Mahad oo la hadlayey ardayda dugsiyada Nuuradiin.
Sheekh Mahad Ibraahim oo sii waday dar-daaranka Ardayda Dugsiyada Nuuradiin, waxa uu yidhi, “Duruufaheenna waynu ognahay, dalkeenna waxa ka jirana waynu ognahay, waayaha innagu xeeranna waynu ognahay. Wakhtigan cidda Illaahay ku soo beegay ee Diinteeda iyo Dhaqankeeda Ilaashanaysaa inuu wakhti dhib badan yahayna waynu la wada-soconnaa, Nebigeennii Muxamed (NNKHA) ayaa inoo sii sheegay in xaaladdan oo kale marka la soo gaadho ninka diintiisa haystaa uu ka dhigan yahay dhimbiil dab ah qof xejisanaya.”
“Waxa laydinka baahan yahay inaad ku dadaashaan dhowrsanaantiina, Xijaabkiinnu inuu noqdo sharafta aad ku faanaysaan meel kasta oo aad joogtaan,” sidaas ayuu yidhi Sheekh Mahad Ibraahim oo la dar-daarmayey ardayda hablaha ah ee dugsiyada Nuuradiin.
Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi, ayaa wacdi diini ah oo ka hadlayey muhiimadda Xijaabku u leeyahay gabadha muslimadda ah iyo sida ay diinta Islaamku u dhiirrigelisay u jeediyey ardayda Dugsiyada Nuuradiin.
“Waxaan idiin soo booqannay inaanu idiin ducayno, waananu idinku faraxsannahay, markasta oo aan waddankan imaaddana waan idin soo booqanayaa Insha Allah,” sidaas ayuu yidhi Sheekh Cabdirashiid Cali Suufi.